Ingca - iGeofumadas
Ngaphaya kwe-OpenOffice, i-Vuze, i-Woopra, okanye ii-applet eziboniswa kwamanye amaphepha ewebhu, ibekwe kakuhle kwiinkqubo eziphathwayo, iTV, iGPS, ii-ATM, iinkqubo zoshishino kunye namaphepha amaninzi esiwabrawuza mihla le ayasebenza...
Eli nqaku lisekelwe kwinkcazo-ntetho eyanikwa e-FOSS4G e-Barcelona ngoSeptemba ka-2010 ngu-Iraklis Karampourniotis kunye no-Ioannis Paraschakis- ovela kwiYunivesithi yase-Aristotle yaseThessaloniki Zoi Arvanitidou - kwiYunivesithi yaseAegean El…
Okona kulungileyo kunokushiyeka kwezi ziganeko ziinkcazo-ntetho zePDF ezisebenziseka kakhulu ekubhekiselwa kuzo kuqeqesho okanye kwiinkqubo zokwenziwa kwezigqibo; ngaphezulu kula maxesha kunomthombo ovulekileyo wehlabathi we-geospatial…
I-Geoinformatics ifika kuhlelo lwayo lokuqala ngo-2010, ngogxininiso olumandla kwi-remote sensing. Nangona unyaka usemncinci, kubonakala ngathi ushicilelo olulandelayo luza kuwugcina lo mgca, kubandakanya nesi sihlandlo ezimbini ezinkulu zeli candelo ...
Sele sijonge ezinye izixhobo zomthombo ovulekileyo kwindawo ye-GIS ngaphambili, kuquka i-Qgis kunye ne-gvSIG, ngaphandle kweenkqubo ezingezizo ezisimahla esizame ngazo ngaphambili. Kule meko siza kuyenza nge-Intanethi ye-GIS ye-Intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi…
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ekushiseni kwekofu ekhuni eyenziwa ngumamazala wam, sasinombono ongemuhle malunga neendlela ezimiselwe u-2010 kwindawo ye-Intanethi. Kwimeko yendawo ye-geospatial, imeko ingaphezulu…
Kanye njengokuba i-GRSS incedisa i-Quantum GIS, i-SEXTANTE iyenza nge-gvSIG, igcina okukhethekileyo. Zezona nzame zentsebenziswano phakathi kweendlela ezivulelekileyo zomthombo kwindawo ye-geospatial, izama ukunqanda uphindaphindo.…
Inguqulelo yokuqala yento enokubakho kwinkomfa ye-gvSIG yesihlanu eza kubanjelwa kwiziko lomsitho laseValencia, ukusuka nge-2 ukuya ku-4 kaDisemba 2009, sele ibhengezwe. Umsebenzi omninzi oza kuboniswa…
Ukuqala kwikota yokuqala ka-2010, iZiko loQeqesho leYunivesithi yaseFlorida liza kuqhuba izifundo ze-gvSIG, eziye zafundiswa ukuza kuthi ga ngoku njengezongezelelo kwiDiploma yeNgcali yezoKhenketho. Lowo unexesha elingama-20...
Inguqulelo yesi-2 ye-GIS ephathwayo ikhutshiwe, isicelo esimangalisayo sokuqhuba kwidiski yangaphandle, imemori ye-USB kunye nekhamera yedijithali iinkqubo eziyimfuneko zokulawula ulwazi lwendawo zombini...
Indlela izixhobo ezikhululekile eziye zakhula ngayo inomdla, kwiminyaka embalwa edlulileyo, ukuthetha nge-GIS yamahhala yavakala njenge-UNIX, ngelizwi leGeek kunye nakwizinga lokungathembeki ngenxa yokoyika into engaziwa. Yonke into itshintshile...
Olu xwebhu lwapapashwa kungekudala liSebe leeNkqubo kunye neeNkqubo zeYunivesithi yaseSimón Bolívar kunye neKomishoni yezoNxibelelwano yeSizwe yaseVenezuela iCONATEL, ndifumene malunga nale nto ngenethiwekhi yaloo ...
Ndiyithanda kakhulu i-Geoinformatics, ngaphandle kokuba yimagazini enencasa yoyilo olukhulu, imixholo ilunge kakhulu kwimicimbi ye-geospatial. Namhlanje inguqulelo ka-Epreli ibhengeziwe, apho ndithathe khona izicatshulwa ezithile eziphawulwe ngombala obomvu...
INkomfa ye-III yasimahla ye-SIG iya kwenzeka eGirona ngo-Matshi 11, 12 kunye ne-13, 2009, kungekudala emva kwe-Informatics Fair 2009 eHavana. NgoLwesihlanu umhla we-13 iya kuba ziindibano zocweyo…
Namhlanje ibe lusuku oluye lwahambelana nam ukuba ndibonise kwikhosi ye-real estate cadastre eBolivia. Isifundo sijoliswe ekuboniseni indlela yokukhetha isixhobo sekhompyutha kuphuhliso lwe-geomatic. Le yigrafu...
Nalu uluhlu lokhuphelo oluhlala luluncedo kakhulu kubasebenzisi be-CAD / GIS amaqonga. Ezinye zazo azifumaneki kwiinguqulelo zamva nje, kodwa ziseyireferensi kwaye kufanelekile ukubeka iliso…